Qabashada Ruuxa Iceland oo leh Heerka Cusub ee Reykjavik ee Raaxada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Qabashada Ruuxa Iceland oo leh Heerka Cusub ee Reykjavik ee Raaxada
Meel kulul oo karsan oo leh kafateeriyaal qabow, nolol habeennimo oo duuban iyo goob muusig oo aad u xiisa badan, iftiinka ayaa si aad ah ugu ifaya caasimadda hip -ka Iceland iyo, ganaaxyo caadi ah, imaatinka The Reykjavik EDITION wuxuu sii xoojinayaa awoodda EDITION ee awoodda qarsoon ee ay ku degi karto meesha ku habboon waqtiga ku habboon.
"Reykjavik waa runtii qabow, magaalo dhallinyaro ah - oo ku habboon summaddeena," ayuu yiri Ian Schrager, oo ah hormuudka aragtida aragtida fikradda hudheelka dukaanka, PUBLIC iyo EDITION abuuraha. "Waxaan u maleyneynaa in tani ay tahay waqtigii Reykjavik, waxaana halkaan ku joognaa udub dhexaadka iyo waqtiga ugu fiican."
Furitaanka horudhaca Nofeembar 9, 2021, The Reykjavik EDITION wuxuu dejin doonaa jaangooyo cusub oo ah waayo -aragnimadii hudheelkii ugu horreeyey ee raaxo leh ee magaalada, isagoo isku daraya kan ugu wanaagsan caasimadda Iceland iyo khibrad shaqsiyeed, sokeeye iyo shaqsiyeed oo astaanta EDITION lagu yaqaan. Natiijadu waa xarun firfircoon oo casri ah oo leh 253 qol, saf aad u fiican oo baararka, makhaayadda saxiixa iyo goob lagu caweeyo iyo, qaabka EDITION ee runta ah, soo bandhigidda nooc cusub oo ah fikradda fayoobaanta bulshada ee casriga ah. Dhulka ilaha kulul, biyaha macdanta iyo fjords-ka dabiiciga ah, hal-abuurnimadan hal-abuurka ah, waaya-aragnimada shucuureed ee muuqaalka iyo xaqiiq ahaanshaha Ian Schrager, oo ay weheliso khibradda hawl-galka ee Marriott International iyo soo-gaadhista caalamiga ah, waxay keentaa dalab gebi ahaanba ka duwan oo sii xoojinaya korodhka Reykjavik soo jiidasho ahaan meel caalami ah oo heer caalami ah.
Iceland waa meel ay ku taamayso dad badan, oo u dhexaysa Waqooyiga Ameerika iyo Galbeedka Yurub-oo kordhay jidadka duulimaadka, iyo muuqaalkeeda kale ee adduunka, oo ka soo jiidata booqdayaasha meelo fog fog. EDITION -ka Reykjavik waa astaanta ugu horreysa ee raaxada ah ee soo gelaysa suuqa oo leh tas -hiilaad iyo adeegyo aan mid kale lahayn. Markii ugu horreysay ee uu ka soo muuqdo khariidadda markii awoowe chess -ka Mareykanka Bobby Fischer uu ku guuleystay Tartanka Chess -ka Adduunka ee Reykjavik 1972, Schrager, oo xilligaas la socday dhacdada, ayaa sheegay in uu la yaabay quruxda dabiiciga ah ee dalka oo aan la dumin. Runtii, waxay ku xardhan tahay Badweynta Waqooyiga Atlantic, oo ka hooseysa Arctic Circle, Iceland waa macno ahaan samaynta, dhulkeeda oo si joogto ah isu beddeleysa natiijada volcanoes guuxaya, ilo kulul oo qulqulaya, geysers qarxaya iyo beddelidda taarikada tectonic. Waxaas oo dhami waxay keeneen cajaa'ib aad u cajiib badan, oo ah beero laami-roog ah oo cagaar cagaaran dhalaalaya, baraf-cirka sare iyo buuraha qallafsan oo ay jeexeen dooxooyin qoto dheer, oo webigu gooyay. "Iceland, waxaad ku arki doontaa waxyaabo aadan ku arki doonin meel kale," ayuu yiri Schrager. “In ka badan meel kasta oo adduunka ah, waa fursad dhab ah oo lala xiriiri karo dhulka iyo dabeecadda waxaana ku faannaa inaan sii ballaarinno sumcadda EDITION meel cajiib ah oo leh hudheel aad u xiiso badan oo ku siinaya dareen dhab ah meel. ”
Isaga oo adeegsanaya taabashadiisa Midas, Ian Schrager ayaa si taxaddar leh u uuraysatay, u maleeyay una qorsheeyay hoteelka inuu abuuro alchemy iyo dareen sixir oo u gaar ah hudheelkan. EDITION-ka Reykjavik waxaa loogu talagalay in lala kaashado shirkad dhisme maxalli ah, T.ark iyo istuudiyaha fadhigiisu yahay New York, Roman iyo Williams oo leh hagidda naqshadda ISC (Ian Schrager Company), si xeeladaysan u qabta ruuxa Reykjavik iyadoo laga fogaanayo sheekooyinka iyo in si adag loo xidido Dareenka xoogga leh ee sumadda EDITION -ka ee sifeynta iyo qaabka la safeeyey. Meel xeeb leh, oo ka soo horjeedda aragtida buuraha ee sharafta leh, hudheelku wuxuu ku yaal meel aan cillad lahayn oo ku taal badhtamaha magaalada: oo ku dhegan Harpa, hoolka riwaayadda caanka ah iyo xarunta shirarka - oo muraayaddiisa muraayadaha midab -kala -duwan leh uu naqshadeeyay farshaxanka Icelandic iyo deenishka Olafur Eliasson - iyo daqiiqado uun laga bilaabo Laugavegur, oo ah waddada ugu weyn ee wax laga iibsado ee magaalada Reykjavik.
Dibedda, REKJAVIK EDITION waa wax aad loogu farxo xaafaddan hoose. Muuqaalkeeda ebony ee alwaaxdii shou sugi ban ayaa loo gubay in la madoobaado iyadoo la adeegsanayo farsamadii hore ee Jabaan, iyo xirmooyinka birta madoobaaday waxay si cad u muujinayaan muuqaalka barafka ee Iceland. Fudud, khadadka nadiifka ah ee dhismaha laftiisa ayaa loo xagliyey si looga faa'idaysto aragtida ugu badan iyo dekeddeeda xiisaha leh oo leh meel laba-albaab laga soo galo oo laga heli karo mid ka mid ah Harpa Plaza, ama Harbor. Tan dambe - oo ah dareen weyn oo imaansho oo la mid ah The Times Square EDITION - waxaa ku yaal daaqad, dhinaceeda hoose waxaa iftiimiyay 12,210 nood noodhadh LED ah.
Sida dhammaan huteelada EDITION -ka, lobby -gu waa meel firfircoon, meel bulsheed oo si hoose u muujineysa dareenka meesha iyo dareenka waqtiga. Halkan, dhagaxa basalt - ama dhagaxa folkaanaha - ayaa caan ah, oo ka soo muuqda sagxadda dhulka, oo lagu dhigay qaab adag oo ay dhiirrigelisay joometeriga Iceland, iyo miiska soo dhaweynta farshaxanka ee muuqda. Qeybta xarunta soo dhaweynta, kooxda ISC waxay ku dartay dhagaxa dhagaxa ah ee Icelandic totem si loo dheellitiro agabka diirran sida maqaar koore oo taabasho ah oo ku duuban tiirar la taaban karo - iyo sagxadda geedka cad, saqafka saqafka iyo dhalooyinka, kuwaas oo dhinac taagan baarka barxadda. Liiska cabitaanka baarka lobby wuxuu diiradda saarayaa khamriga adduunka xulashada galaaska iyo is biirsadayda caadiga ah oo leh maroojin Icelandic ah. Qolka jiifka waxaa ku yaal dab-shid dhexe oo dab-furan kaas oo ah dabka meesha, oo ay ku hareereysan yihiin fadhiga iyo ururinta alaabta guriga lagu sameeyo ee kooxaha fadhiga u dhow, sida Jean-Michel Frank kursi-ku-dhiirrigeliyay xiirashada cad iyo Pierre Jeanneret -Kuraasyo waxyi ah oo maro madow ku jira. Sida weligeed ah, waxaa xoog la saaraa iftiin diirran oo aan toos ahayn, kaas oo loo malaynayo in loo tixgeliyey inuu abuuro iftiin jilicsan iyo inuu iftiiminayo alaabada go'an sida baarka iyo miiska soo dhaweynta iyo laambadaha sagxadda cad ee Christian Liaigre si loo abuuro u ekaanshaha dahabka rakibidda sanduuqa.
Gudaha albaabka hudheelka, ISC waxay iskaashi la samaysay farshaxan -yahannada maxalliga ah si ay u abuuraan totem farshaxan oo ka samaysan tiir dhexaad ah oo ka samaysan koonfurta Iceland. Kordhinta meel u dhow afar mitir, dhiirrigelinta farshaxanka waxaa laga helaa Cairns -dhaqameedka u dhaqma sida astaamaha guud ahaan baadiyaha Iceland. Si aad ah u shiday labada koronto iyo shumac oo ay hareereeyeen kursi basalt ah, totem waxaa lagu daboolay harag adhi ah oo madoow, damask madow iyo barkimooyin xariir ah, oo noqonaya meel la iskugu yimaado oo lagu arko bartamaha barxadda. Midda ku xigta tan, oo ay dhiirrigelisay muuqaalka aurora borealis (Nalalka Waqooyi), ISC waxay fiidiyow ku duubtay Nalalka Waqooyiga waxayna abuurtay farshaxan -gacmeed qoob -ka -ciyaaraya oo cagaaran iyo guduud ah oo qurux badan, saddex cabbir iyo jawi farshaxan leh. Waxay ku taallaa hoolka, waxay kicisaa falcelin iyo shucuur, oo la mid ah markhaatiga ifafaalaha dabiiciga ah ee cirka habeenka Iceland… Waxaan ugu yeernaa Lights Northern on demand.
Waxaa laga heli karaa hoolka, dabaqa hoose wuxuu kaloo hoy u yahay Tides, makhaayadda saxeexa oo leh qol wax lagu cuno oo khaas ah, iyo kafateer leh alaab la dubay, iyo Tölt, oo ah baar u dhow oo ka qaata tilmaamaheeda Qolka Punch ee London ee EDITION. Tides, oo leh barxad bannaanka ah iyo albaabkeeda hore ee biyaha, ayaa waxaa caawiya Gunnar Karl Gíslason-oo ah cunto kariyaha ka dambeeya Dill, makhaayadda xiddigta New Nordic Michelin ee aadka loo dabaaldego ee Reykjavik. Gudaha hodanka ah oo hodanka ah ayaa si feker leh loogu tixgeliyey kala-guur aan kala go 'lahayn maalin ilaa habeen, oo ay ka muuqdaan daaqadaha dabaqa ilaa saqafka kuwaas oo, maalintii, iftiin dabiici ah ku dahaadhay tiirarka shubka la shubay iyo faahfaahinta qoryaha dambaska saliidda leh sida darbiyada saqafka ee aadka u iftiimay , agabyo kala duwan, iyo bar-qaabeeya laba geesle ah oo dhexda laga suro naxaas iyo alabastar oo caado u ah farshaxanka caanka ah ee Faransiiska, Eric Schmitt. Aroortii, quraacdu waa isku dar cusub oo caafimaad leh oo casiir nadiif ah, keega, miro, badar iyo cagaaran (yogurt Iceland) oo lagu daray menu a la carte ee suxuunta kulul iyo xulashada sanduuqyo wejiga furan. Qadada iyo cashada, Gíslason wuxuu u adeegaa cunnooyinka casriga ah ee Iceland, oo leh tilmaamo khiyaano leh oo ku saabsan hababka karinta dhaqameed, oo diiradda lagu saarayo badeecadaha maxalliga ah ee xilliyeedka iyo tayada ugu sarreeya ee maaddooyinka adduunka inta badan lagu kariyo dab furan. Ka sokow liis khamri caalami ah oo ballaaran, filo suxuunta sida salad toosan oo lagu daray boqoshaada lo'da la shiilay ee suugo soy ah iyo yicib duban, dhammaan Arctic char ka buuxsamay liin, dill iyo subagga toon, kibis Atlantic la dubay, baradho la dubay, geedo isku qasan iyo subag iyo garabka wan yar oo la dubay oo la shiilay, basasha la jarjaray iyo reexaanta tufaaxa, iyo macmacaanka, keega karootada karootada, jalaatada subagga, karootada iyo macaanka buckthorn badda, oo leh saliid caraway oo duban. Waxa kale oo jira liis cunto-fudud ah oo toddobaadka ah iyo saddex habeen toddobaadkii, The Counter, oo eegaya jikada furan ee tiyaatarka, ayaa u adeegi doonta siddeed koorso oo dhadhamin ah oo ay ku jiraan laba khamri ilaa 10 qof. Dhanka kale kuwa raadinaya wax aan caadi ahayn waxay ku soo boodi karaan roodhida iyo kafateeriga qaxwaha iyo xulashada scones cusub oo la dubay si ay u dhadhamiyaan ama sanduuqyo rooti galley ah oo ay martidu wax ku cuni karaan ama ka qaadan karaan.
Dhinaca ka soo horjeeda hoolka, oo ka durugsan indho -jabka, Tölt - oo loogu magacdaray socodkii shanaad ee u gaarka ahaa fardaha Icelandic ayaa si fiican loogu yaqaan - waa bar raaxo leh, oo loogu talagalay inay tahay meel qarsoon oo qarsoon oo leh saddex saqaf oo isku dhow oo leh roogag caadooyin midab leh leh joometeri -dhaqameedka Icelandic, derbiyada tambour ee teak, xafladaha oranji ee la gubay iyo boogaha timaha pony ee ku xeeran dabka dhexe. Meel ka baxsan aalkolada, boosku wuxuu ku daboolan yahay saqafyada saqafka walnut hodanka ah, iyo sagxadda dhulka, shandelier walnut caadadiisu samaysay iyo daaqadaha sagxad ilaa saqafka oo qaabeeya aragtida Harpa. Gadaashka bar-marinta cagaaran ee gadaasha ah waxaa ku yaal dib-u-dhalaal khaanado naxaas ah oo laga xannibay saqafka, kaas oo abuuraya iftiin diirran oo hoostiisa lagu raaxeysto liistada is biirsaday ee ay dhiirrigelisay dhaqanka Icelandic iyadoo la adeegsanayo ruuxyada Icelandic ee maxalliga ah.
Loogu talagalay inay noqoto meel u gaar ah, Saqafku wuxuu ku yaal dabaqa 7 -aad ee hoteelka wuxuuna bixiyaa buuro dhaadheer, Badweynta Waqooyiga Atlantic iyo vistas -kii hore ee magaalada. Meel bannaan oo loo kala qaybin karo albaab galaas ah oo loogu talagalay dhacdooyinka khaaska ah ayaa u oggolaanaysa inay noqoto meesha ugu wanaagsan ee laga raaxaysan karo fiidkii xagaaga dhalaalaya ee aan dhammaadka lahayn iyo sidoo kale nalalka waqooyiga ee sixirka bilaha qabow. Albaabada galaaska dabaqa ilaa saqafku waxay u furan yihiin balakoon balaadhan oo ku wareegsan xilli-xilliyeedka dibadda ah, oo ku kala firirsan fadhiga raaxada leh iyo god dab oo weyn, halka gudaha oo dhan ee madoobaa ay abuuraan asal caqli-gal ah oo aan ka weecin aragtida. Halkan, xiisaha aan caadiga ahayn waxaa lagu daraa liis yar oo ah cuntooyin raaxo leh sida roodhida la dubay, ismaris la dubay iyo saladh cusub. Laga soo bilaabo halkaan, waxaa cad in Ian Schrager uu naqshadeeyay hoteelka iyadoo lagu saleynayo aragtida guriga.
Isagoo ku dul fuulaya dabaqyada saqafka sare, 253 qol oo hoteelka iyo qollada hoteelka ah ayaa loogu talagalay inay noqdaan dib-u-gurasho diirran, mid walba sariirtiisu waxay u jeeddaa daaqadaha dabaqa ilaa saqafka oo qaabeeya aragtiyo kala duwan oo ku saabsan xaafadda ku xeeran. Qaarkood waxay ku dhammaystiraan barxad bannaanka ah, halka dhammaantood ay yihiin astaamaha habka sumadda EDITION ee raaxada casriga ah oo leh dhadhan maxalli ah oo maxalli ah. Palette-carrab-la 'oo ka samaysan alwaax dambas ah iyo geed cawlan oo cawl ah ayaa u ah aasaas diirran qaab dhismeed derbiga la taaban karo, alaabta guriga lagu sameeyo ee Talyaaniga, nalalka naxaasta sariirta naxaasiga ah, roogagga dhogorta fauxka ah, iyo farshaxanka iyo alaab-gacmeedyada ka yimid farsamayaqaannada maxalliga ah, sida sariirta midabka leh tuur shirkadda dhogorta maxalliga ah, Ístex, dhoobada farshaxanka Guðbjörg Káradóttir, iyo farshaxanka qolka ee farshaxannada caanka ah ee Iceland Pall Stefansson iyo Ragnar Axelsson oo soo bandhigaya muuqaalka Icelandic, oo u gaar ah EDITION. Dhanka kale, musqulaha monochrome -ka ah oo leh caagad dhoobada cad oo macmal ah oo lagu sameeyay Talyaaniga, waxaa lagu diyaariyey wax aan waxba ka jirin oo marmar cad ah, qalab madoow oo madow ah, iyo agabyo ay weheliyaan musqulaha Le Labo ee udugga gaarka ah ee EDITION. Laga soo bilaabo meesha ugu sarreysa ee ku taal dabaqa 6aad, Penthouse Suite oo hal qol ah-oo leh barxad u gaar ah ayaa leh deked aad u qurux badan, Harpa iyo aragtiyo buur oo ay sii dheer yihiin kuwo dhalaalaya, iftiin leh oo ka buuxsamay gudaha gudaha alaabta caadooyinka raaxada leh ee codadka boomaatada dufanka leh. Penthouse Suite ayaa sidoo kale lagu xiraa musqul aad u weyn oo leh marmar cad oo Talyaani ah iyo dab -shid dhexe.
EDITION-ka Reykjavik wuxuu bixiyaa kulanno casri ah iyo goobo munaasabado, oo ay ku jiraan istuudiyayaal dabacsan, qol-boodh leh iftiin dabiici ah, sagxadaha saqafka oat-ballaaran, iyo qol weyn oo kubbadda leh oo leh meel hore u shaqeyn jirtay. Qolka kubbadda dabacsan ee leh daaqadaha muraayadaha dabaqa ilaa saqafka waxaa loo qaybin karaa laba meelood oo kala duwan, halka albaabbada muraayadaha waawayn ay ku filan yihiin in baabuur la dejiyo. Qolka kubbadda gudaheeda waxaa ku dhegsan suulaan alabaster ah oo la sudhay dabool dabiici ah oo dusha laga soo rogay oo ku wareegsan qolka kubbadda.
Dabaqa hoose ee hoose wuxuu hoy u yahay Qorrax-dhaca, oo furmaya dabayaaqada sannadkan, meel qabow oo dhulka hoostiisa ah oo leh nidaam dhawaaqa oo casri ah iyo iftiin masraxeed oo iftiiminaya gudaha shubka madow ee mugdiga leh oo leh baastada shubka madow ee kabka ah. Qorrax -dhaca ayaa loo qaybin karaa saddex boos oo laga heli karo hoteelka iyo barxadda Harpa. Iyada oo ay weheliso liisaska is biirsaday ee dilaaga ah iyo liisaska dhacdooyinka socda, naadigu wuxuu martigelin doonaa qaar ka mid ah DJ -yada ugu sarreeya adduunka iyo jilaayaasha, isagoo u astayn doona inay tahay meeshii ugu dambaysay ee aan la oggolaan karin ee Reykjavik oo ah goob nololeed oo aad u wanaagsan. Waxaa kaloo jira albaab gaar ah oo loogu talagalay kuwa u baahan in si qumman loo fiirsado. “Waxay noqon lahayd riyo inaan ka furo Studio 54 halkaan oo mugdigu socdo 6 bilood halkii uu ka ahaan lahaa 8 -da saacadood sida uu ka sameeyo Magaalada New York. Waxay ahaan lahayd meesha ugu habboon, ”ayay tiri Schrager.
Sidoo kale, dabaqa hoose ee hoose waxaa ku yaal jimicsi, kaas oo lagu xardhay tababarka xoogga madow ee ugu casrisan, culeyska, iyo qalabka wadnaha, si kastaba ha ahaatee, waa fikirka bulsheed ee Spa oo ah midka ugu gaarka ah Dhinacyada hudheelka oo runtii si gaar ah gooni uga dhigaya EDITION -ka Reykjavik. Dhinacyada saddexda qol ee daaweynta, hammam, qolka uumiga, sauna, iyo barkad qubeys oo bixisa daaweynta biyaha, waxaa sidoo kale jira qol dhexe oo leh baararka isboortiga, kaas oo maalinti u adeegta menu caafimaad leh oo cusub oo ah tababarka dambe Viking ruxitaan, shaambo iyo infusions vodka oo ay weheliyaan cunto fudud sida roodhida volcano oo leh milix lava madow. Tan waxaa ugu wanaagsan oo lagu raaxeystaa barkadda biyo-biyoodka leh oo ay weheliso daaweynta 60-ka daqiiqo ee Sundown Spa, oo ay ku jirto duugista jirka ee dhiirrigelisa iyo duugista madaxa onyx ee qabow. Waxay ku taal meel si toos ah uga soo horjeedda Qorrax-dhaca, Spa-ku waa meesha ugu fiican ee xafladda xafladda kahor si aad si fiican ugu diyaargarowdid fiidkii xiisaha badnaa ee farxadda. Schrager wuxuu yiri: “HBS iyo xarun caafimaad oo leh baar waa wax aanan hore u arag. “Laakiin hoos u degida halkaas iyo is dhexgalka bulshada iyo cabbitaanka iyo ka dib gelitaanka biyaha kuleylka ayaa ah, mar kale, jawaab u ah joogitaanka Iceland. Iyo isku -darka tan si dhadhan leh oo xarrago leh ayaa saldhig u ah waxa sumadda EDITION -ku ku saabsan tahay. ”